पाँचथरमा एकै परिवारका ९ जनाको हत्या ! - JagaranPost
Home/प्रदेश १/पाँचथरमा एकै परिवारका ९ जनाको हत्या !
पाँचथरमा एकै परिवारका ९ जनाको हत्या !
फिदीम : पाँचथरको मिक्लाजुङमा गएराति एकै परिवारका ९ जनाको हत्या भएको छ । मिक्लाजुङ गाउँपालिका –३ आरुबोटमा बमकुमार फियाक(लिम्बु)र उनका ज्वाइँ धनराज फियाकका परिवारको हत्या भएको प्रहरी निरीक्षक अरुणकुमार पौडलले जानकारी दिएका छन् ।
दिल्लीमा नेपाली युवतीमाथी सामुहिक बलात्कार
दुबै खुट्टा बाँधेर भैंसीलाई करणी गर्ने पक्राऊ